OROMOO – YEROOBLOG
Finfinneen dachee Oromooti. Handhuura Oromiyaa fi giddu galeessa Oromoo Maccaa fi Tuulamaati. Qe’ee Tufaa Munaa, Qajeelaa Dooyyoo, Abeebee Tufaa, Guddataa Araddoo, Jamoo Dabalee, Soraa Lomee, Galatee Asheetee, Axaalee Jaatanii fi Shubbuu Ejersaafaati.
Finfiinneen yeroo teessoo Mootii Minilik taatee tajaajiluu eegalte irraa kaasee hanga har’aattii qonnaan bultoota Oromoo nyaachaa, buqqisaa, aadaa, duudhaa fi eenyuummaa Oromummaa dhabamsiisaa sadarkaa amma irra jirtu irra akka geesse beekamaadha. Kuufaatii Dargii boodas chaartarii yeroo cehumsaa bara 1983-1987 (ALI) tumameen magaalaan Finfinnee akka naannoo of dandeesse tokkootti ክል 14 jedhamtee akka of bulchitu labsamee ture. Waggoota afuriif magaalaan Finfinnee naannoo taatee bulaa turte. Finfinneen yeroo akka naannoo of dandeesseetti bulaa turte labsii daangaa jettee bara 1986 seera baafatte. Labsii baafatte kanaanis daangaan ishee hanga Magaalota Buraayyuu, Laga Xaafoo Laga Daadhii, Sabbataa, Galaan fi kkf walakkaa isaaniitti akka bal’atu ummata Oromoo fi Mootummaa Naannoo Oromiyaa waliin osoo hinmariyatin seera baafatte.
Bara 1987 heerri mootummaa FDRI tumame. Heerri mootummaa biyya keenyaa kun waa’ee magaalaa Finfinne dhimmootni gurguddoo sadii akka jijjiiraman ifatti tume. Inni tokkoffaan Finfinneen mirga naannoo ta’uu dhabdee sadarkaa bulchiinsa magaalaatti akka ijaaramtu tume. Dhimmi lammaffaan Walitti dhufeenyi Oromoo fi Finfinnee jaarraa tokkoo oliif addaan cite ture deebisee walitti hidhe. Yeroo cehumsaa Oromiyaa fi Finfinneen akka naannoo fi naannootti walitti dhufeenya qabaachaa turani. Heerri mootummaa kun tumamuu booda Finfinneen akka qaama Oromiyaa taatee fi Oromiyaanis mirga addaa Finefinneerra akka qabdu ifatti kaa’e. Dhimmi sadaffaan Finfinneen teessoo mootummaa federaalaa waan taatteef akkasumas mirga ofiin of bulchuu sabaa fi sablammoota magaalatti keessa jiraatan eeguuf jecha akka naannoolee mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu osoo hintaane mirga ofiin of bulchuu qofa akka qabaattu ifatti tume. Heerri Mootummaa FDRI walitti dhufeenya Oromoo fi Finfinnee gidduutti yeroo dheeraadhaaf addaan cite ture jijjiire. Finfinneen erga uuumatee kaaftee kan Oromoo waliin addan cittee turte akka qaama Oromoo taatu murteesse. Finfinneen kan Oromoo ta’uu mirkaneesse!
Heerri Mootummaa FDRI bara 1987 bahe Finfinneen Mirga ofiin of bulchuu malee mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu akka hinqabne, Dhimmi bulchiinsa magaalaa Finfinnee labsiidhaan akka bahu ibsuudhaan seerota duraan turan (labsii daangaa magaalattiin bara1986 baafatte dabalatee) diigee jira. Kanaafuu dhimmi daangaa bulchiinsaa magaalaa Finfinnee fi Godina Addaa gidduu jiru kan murtaa’u fedhii ummata Oromoo daangaarra jiraatuu, fedhii Mootuumaa Naannoo Oromiyaa fi Bulchiinsa Magaalaa Finfinneetiin qofa akka ta’e ifatti beekamuu qaba. Kanaafuu, labsiin daangaa magaalaa Finfinnee fi Godina Addaa Oromiyaa Naannoo FInfinnee kan bara 1986 bahe ummata Oromoo fi MNO kan hin hirmaachisne waan ta’eef safartuu kamiiniyyuu fudhatama hin qabu.
Dhimmi daangaa Finfinnee fi Godina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee dhimma daangaa bulchiinsaa naannoo tokko keessatti geggeeffamu akka ta’es ifatti beekamuu qaba.Dhimmi daangaa Finfinnee heera mootummaa biyya keenyaa bara 1987 bahe bu’uura godhachuudhaan ummata fedhii fi faayidaa ummata oromoo karaa mirkaneessu qofaan hojiitti hiikamuu qaba. Dhimma daangaa Finfinnee karaa waaraatiin furuuf koreen nama 10 of keessaa qabu ijaarame qorannoo kan dhiheesse yoo ta’u MN Oromiyaa bu’aa qorannoo kanaa guutummaatti fudhatee akka hojiitti hiikamuuf socho’aa jira.
Dhimmi daangaa bulchiinsaa magaalaa Finfinnee waliin walqabatee jiru bu’uura heera mootummaa FDRI fi mirgaa fi faayidaa ummata Oromoo karaa kabachiisuun hiikuun akkuuma jiruttii ta’ee, dhimmi xiyyeeffannoo barbaadu kan biraa dhimma pilaanii magaalatiiti.
Pilaaniin Finfinnee kanaan dura bahaa turee hirmaannaa mootummaa Oromiyaa fi uummata Oromoo of keessaa hin qabu. Pilaanii Finfinnee keessaatti qophaa’aa ture aadaa duudhaa fi eenyumaa oromoo kan calaqqisiisu miti. Abbaa biyyummaa Oromoo kan agarsiisu miti. Erga heerri mootummaa FDRI bahee boodas dogogoroota yeroo adda addaa turan kallattii sirreessuuf kan akeeku miti. Dhalootni Oromoo itti aanu abbaa biyyummaa isaa akka hubatuu fi abbootiin isaa akkamitti akka jiraataa turan, aadaaa duudhaa fi seenaan Oromoo akkamitti entertain ta’a kan jedhu of keessaa hinqabu.
Pilaaniin qophaa’aa ture lafa qabachuuf qofa qophaa’aa ture jechuun ni danda’ama. Waa’ee ummataa Oromoo fi qonnaan bulaa buqqa’uu dantaa tokkollee hinqabu. Qonaann bulaa Oromoo Caffee isaa, Odaa isaa diigaa deemaa ture. Xurii summaa’aan magaalaa Finfinnee keessa bahee gara maasaa qonnaan bulaa dhaqu utuu miidhaa hinqaqabsiisin akka itti hogganamullee hinkaa’u. Kana waan taa’eef pilaaniin magaalaa Finfinneetti yeroo adda addaa qophaa’aa ture buqqa’uu Oromoorra yeroo mootii Minilk irraa kaasee akka sabaatti gahaa ture kan itti fufsiisaa turedha jechuun nidanda’ama.
Kaayyoon heera mootummaa FDRI bara 1987 tumamee mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu sabootaa mirkaneessuun boqonnaa qe’ee ofiirraa buqqa’anii godaanuu cufuuf ture. Oromoon mirga qe’eesaa keessa jiraachuu akka qabaatu gonfachiisuun, abbaan biyyuummaa Oromoo akka kabajamu labsee ture. Dhimmi hiree ofii ofiin murteeffachuu fi mirga abbaa biyyummaa kun bakka hundatti deebii argatee cufamee Finfinneettii utuu hincufamani hafe.
Dhimmi Finfinnee fedhii fi faayidaa Oromoo karaa calaqqisuu qofaan deemu akka qabu herri mootummaa keenya ifatti kaa’ee jira. Rakkoo gama mirga heera mootummaa irratti kaa’ame hojiitti hiikuu dadhabuudhaan walqabatee jiru furuuf qaama biraa kamitiyyuu quba qabuun hindanda’amu. Hundaa ol rakkoon kan hoggansa keenyati. Rakkinichi mirga heerri mootummaa nugonfachiise bilchinaa fi karaa tarsiimawaa ta’een sirnaan oggannee hojiitti hiikuu dadhabuurraa madda. Kanaafuu gama kanaan dhimmota sirreeffachuu qabnu hedduutu jira.
Gama kanaan dhimmi sirraa’uu qabuinni tokkffaan Finfinne akka naannoo of dandeesse tokkootti ilaaluudha. Ilaalchi kun dogoggora waan ta’eef sirraa’uu qaba. Finfinneen qaama Oromiyaati. Mirgi hiree ofii ofiin murteeffachuu Finfinnee daangaa seeraa Oromiyaa keessatti akka ilaalamuu beekuun murteessadha. Dhimmi lammaffaan sirraa’uu qabu akka sabaatti Finfinnee keessa gallee jiraachuu, hojjechuu fi daldaluu soodaachuudha. Ilaalchi Finfinnee keessaa baqachuu, Finfinnee keesatti hoojatanii argachuu sodaachuu jijjiiramuu qaba. Sadaffaa Aadaa fi duudhaa Oromoo dagaagsuuf namni biraa akka nuuf hojjetu barbaadna. Ilaalchi akkasii dogogoradha. Eenyuummmaan Oromoo akka hundee gadi fageeffatu godhuun dirqama hunda keenyaati. Yeroo ammaa kana jiraattota magaalaa Finfinnee keessaa %30 Oromoota akka ta’an ragaaleen ni mul’isu. Ta’us maagaalicha keessatti dhimma sabboonummaa Oromoo irratti waan hinhojjetamneef magaalatii keessa Oromon waan keessa jiraatuyyuu hinfakkaatu. Magaalattii keessatti sabboonummaan Oromoo sadarkaa dhabamuu irra gahee jira. Oromoon gahee abbaa biyyummaasaa akka mirkaneessu sabboonummaa dagaagsuun murteessdha.
Dhimmi sadaffaan caasaan Dh.D.U.O sadarkaa magaalaa irraa kaasee hanga gadiitti hoggansa magaalaa Finfinnee keessa jiru miira abbaa biyyummaa cimaadhaan Oromummaa Finfinnee keessatti cabe iddootti deebisuuf sadarkaa barbaadamutti qabsaa’uu dadhabuu dha. .Hoggansi sadarkaadhaan jiru kuni miira abbaa biyyumaatiin hoggansa tarsiimawaa fi gahumsa qabu kennuudhaan fayyadamummaa ummata keenyaa mirkaneesuun walqabatee hanqinootni mul’atan gara fuula duraatto sirraa’uu qabu.
Dhimmi afraffaan caasaa Godina Addaa waliin kan walqabatudha. Godinni Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfiinee walitti hidhamiinsa diinagdee fi hawaasummaa ummatni Oromoo magaalaa Finfinnee waliin qabdu cimsuuf Oromummaa Finfinnee keessatti cabee ture bakkatti deebisuuf sochii godhamu akka tumsu yaadameeti hundaa’e. Ta’us rakkoo gahumsa hoggansaa fi rakkina walxaxaa kiraa sassaabdummaa lafaa irraa kan ka’e GAONF ergama walitti hidhamiinsa Oromoo fi magaalaa Finfinnee cimsuuf isaaf kennamee sadarkaa barbaadametti raawwachauu hindandeenye. Turtii hanga ammaatti GAONF fi Finfinnee gidduu daangaa bulchiinsaa kaawwachuu dadhabuun, ijaarsa addaa adda bulchiinsa magaalaa Finfinnettin daangaa GAONF keessatti raawwatamu callisanii ilaaluun, hanqinoota gama kanaan jiranis ifatti baasanii dubbachuu dadhabuun gara fuula duraatti dhimmoota sirraa’uu qabanidha.
Yerooblog	Culture&History, Opinions, Oromia &Ethiopia, Politics	Leave a comment November 29, 2017 November 29, 2017 4 Minutes
Gabaasa Human Rights Watch kan bara 2016 Itoophiyaa ilaalchisee baasee Afaan Oromootiin
Naannoo guddicha Itiyoopiyaa – Oromiyaa guutuu keessatti Sadaasa bara 2015 eegalee akkasumas naanoo Amaaraatti Adoleessa bara 2016 eegale hirironni gurguddoofi hin eegamne godhamaniiru. Humnoonni tikaaa mootummaa Itoophiyaa haleellaa humnaa hiriirota baayyinaan nagaa turan irratti fudhataniin lubbuu namoota 500 olii galaafataniiru.
Gaafa Onkolooleessa 2 naannoo Oromiyaa magaala Bushooftuutti namoota ayyaana Irreechaa kabajuuf walitti qabaman irratti humnootni tika mootummaa dhukaasaa yeroo bananiifi boombi imimmeessu tuuta ummataatti yeroo darbatan namootni rifatanii baqatan walirra deemuudhan hallayyaatti nam’anii dhumaniiru. Daragaggeeyyin dhumaati Irreechaatin aaran gamoole mootummafi qabeenya dhunfaa tokko tokko irratti tarkaanfi barbadeessu fudhannaan mootummaan gaafa Onkoloolessa 9 labsi yeroo muddamaa garmalee nama ukkamsuu kan ji’oottan 6f turu labse. Labsiin yeroo muddama kun gochoota heeddu haala ifa hin taaneen dhorkuurra darbee mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu, mirga gurmaayuufi hiriira nagaa bayuu dhorkeera. Qajeelfamni labsii sana booda bayes tooftaale hunootni tikaa duriyyuu ittiin mirga namaa dhiitaa turan kan akka ajaja mana murtii malee lammilee hidhuufa seera qabeessa godheera.
Hiriironnii mormii kun kan gaggeeffaman haala qaawwaan siyaasa tokkoole hin jirre keessatti ture. Paartiin biyya bulchu teesso paarlaama biyyatti 100% dhuunfatee jira. Dhaabbileen siivikiifi midiyaaleen walabaas bilisaan akka hin hojjanne godhamaniiru. Namoonni ifatti mootummaa hin deeggarre ajaja mana murtii malee nihidhamu, nireebamu.
Itoophiyaan looltoota ishee qama Ergama Gamtaa Afrikaa (AMISOMii) goote gara Somaaliyaatti nibobbaafti. Bara 2016 humna ‘poolisii addaa’ kan furguggifame lolus humna waraana isheetti dabaluun gara Somaliyaatti akka ergite gabaafame ture. Adoolessa bara 2016 humnootni tikaa Itoophiya kan towanno AMISOM jala hin turre yeroo haleella AL-shebaab irratti fudhatan namoota nagaa 14 naanno Beeyiiti ajjeesaniiru. (Boqonnaa Somaliyaa dubbisaa)
Bara 2016 karoorri mootummaan daangaa magaala guddittii Finffinne gara naannoo Oromiyaatti baldhisuuf baasee mormii kutaa Oromiyaa mara waliin gaye kaasee ture. Humnootni tikaa mootummaas mormitoota irratti halellaa cimaa raawwatan. Yaaddon mormitoota karoorri maqaa ‘misooma qindaawa Finfinneefi naannoshe’ jedhamu kun akkuma waggoottan kurnan darban ta’aa turetti qotee bultoota Oromoo lafa isaniira buqqusuuf deema jechuun ture. Ji’a Amajjii bara 2016 Mootummaan karoora guddaa Finfinne mormii kaase kana haqeera jedhus uummanni hin amanne. Sababiin isaammoo mootummichi waadaa seenaa ture hedduusa cabsuun waan beekamuufi. Mormitoonni komee waggoottan kurnan hedduufi haleella humnaa dogoggooraa kan humnootni tikaa fudhatan mormaa turan. Mormitoonni iddo tokko tokkotti badii akka geessisan gabaasni muraasni ni agarsiisu. Garuu bakka baayyeetti mormii isaanii karaa nagaatiin dhageessisaa turan. Ebilaafi Caamsa bara 2014s mormiin walfakkatuufi haleellan humnoota tikaa walfakkaatu fudhatamanii turan.
Yeroo mormiin kun adeemsifamaa ture humnootni tika mootumma Itoophiyaa barattoota kuma kurnaniin lakkaayaman, barsiisota, miseensota paartilee mormituu, hojjattoota fayyaa akkasumas namoota ijoolle poolisii jalaa baqataniif dawoo kennan ykn gargaaran gara mana hidhaattii guuraniiru. Baayyeen namoota hidhamanii turanii hiikamanus namoonni lakkofsi isaanii hin beekamne gargaarsa seeraaffi daawwii maatii malee osoo himanni tokko irratti hin banamiin haga yoonaa mana hidhaa tursiifamaniiru. Hoggannoonni paartilee seeraan galmaayanii socho’anii kan akka paartii Kongirasi Federaalistii Oromoofaa labsii farra shororkeessumaan himatamanii mana hidhaati guuramaniiru. Qabsoo lola-malee jabeessanii barsiisaa kan turan itti aanaa dura taa’aa KFO dabalate hogganoonni marti shorrorkeessuman himatamanii hidhamaniiru.
Ji’a Adoolessaa keessa hidhamuu miseensota komitee eenyumma walqaayit sababeefachuun mormiin gara naannoo Amaarattis babaldhateera. Komiteen kun rakkina daangaa bulchiinsa yeroo dheeraf deebii hin arganne furuuf garee socho’aa turaniidha. Xiyyeeffannoon mormitoota naannoo Amaaraa inni guddaan walcaalmaa hirmaannaa aangoofi dinagdee biyyatti kan warra mootummicha deeggaran addatti fayyadu irratti mormii dhageessisuu ture. Hagayya 6 fi 7 qofatti humnootni tikaa mootumma naanno Oromiyaafi Amaara keessatti namoota 100 ol ajjeesaniiru. Magaala Baahirdaar qofa keessatti namoota 30tu ajjeefame. Magaalli Bahirdaar magaalota mormii uummanni garmalee guddaan irratti hirmaate keessumeessan keessa ishee tokko turte. Naanno Amaaraa guutuu keessatti ummata heddumminaan akka hidhanis gabaafameera.
Naannoo Ummatoota Kibbaa zoonii koonsootti mormii uummanni naannoo koonsoo daangaa bulchiinsa irratti kaase ukkaamsuuf humnootni tikaa mootummaa Itoophiyaa dhalattoota Koonsoo kurnaniin lakkaayaman ajjeesaniiru.
Mootummaan komee mormitoota naannoo Oromiyaa, Amaaraafi Koonsoo irraa ka’e sirnaan deebisuuf fedhii takkallee hin agarsiisne. Inumaayyuu tasgabbii boorayeef sababa kan ta’an dhabamuu bulchiinsa gaariifi hoji dhabdummaa dargaaggootu humnoota alaan garmalee hoo’ifame jedhuun komicha qaama alaatti naanneessan.
Mootummaan ajjeechaa naannoo Oromiyaa, Amaaraafi Koonsootti raawwate sirnaan qorachuuf fedhi takkallee hin agarsiifne. Qaamaa mootummaa kan ta’e komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa Waxabajjii darbee gabaasa paarlaama biyyattiif dhiyeessan keessatti humni humnootni tika mootummaa fayyadaman balaa mormitoonni poolisootarraan gayaniin walbira qabamee yoo ilaalamu humna walmadaalawa fayyadaman jechuun gabaasaniiru. Ragooleen ifatti jiran garuu faallaa gabaasa kanaa agarsiisu.
Labsiin muddamaa Onkolooleesa baye mormii mootumman hin hayyamne mara dhorkeera. Naanoo koomandi poostin murteesse mara keessatti hanga labsiin muddama kun hin kaanetti ajaja mana murtii malee akka fedhanitti nama hidhuus hayyameera.
Poolisiin addaa naannoo somaalee lola adda bilisa baasa Ogaaden (ONLF) waliin gochaa jiru keessatti dhiitta mirga nammooma garmalee guddaa raawwataa jira. Namoota ONLF gargaaru ykn leellisu jedhamanii shakkaman murtoo seeraa malee ajjeesuun, seera malee hidhuufi reebuun gabaafamaa ture. Maatiin namoota daawwanna pirezidaantiin bulchiinsa naanno Somaale Abdii Illey Meelboorn, Awustiraaliyaatti Waxabajjii 12 mormanii Itoophiyaati hidhamaniiru.
Bilisaan yaada ofii ibsachuufi ijaaramuu
Miidiyaan biyyatti ammallee towannoo mootumma jalaa hin kan hin baane dha. Inumayyuu labsii muddama dhuma bara 2016 bayeen towannoon mootumma garmalee itti jabaateera. Kanarra kan ka’e filannoon gaazexeessitoota biyyatti bayyee ofumaa of-dhorkuu ykn reebamuu ykn hid*hamuu ykn biyya baqatanii baduu qofa ta’ee jira. Erga bara 2010 as yoo xinnatee gaazexeessitooni 75 biyya gadhiisani baqataniiru. Gaazexeessitoota doorsissun alattis toftaan mootumman ittin miidiyaa walabaa dangeessu maneen maxxansaa, maxxanssitootafi raabsitoota kiyeesuufaa dabalata.
Gaazexeessitoonni heddun kan akka Iskindir Naggaafi Wubishet Taayyee, namoonni hiriira nagaa irratti hirmaataniifi miseensonni paartilee mormituu maqaa labsii farra shorrorkeessumman hidhamanii jiru. Gaazexeessan Geetacho Shifarra himata mootummaa maqaa balleessu jedhuun yakkamee ji’a Sadaasa keessa hidhaan waggaa tokkoo itti murtaayee jira. Barreessan Zalaalam Wargaagenyahu jedhamus guyyota 700 erga hidhamee booda Caamsa 10 labsii farra shorrorkeessaatiin yakkamee hidhaan waggaa 5fi ji’a 2 itti murtayeera. Gaazexeessa Yusuuf Geetachoos Hagayya bara 2015 erga labsi farra shorrorkeessaan yakkamee waggaa 4 hidhamee booda Fulbaana 10 dhiifamaan mana hidhaatii gadhiifameera.
Mootummaan Itoophiyaa marsariitota dhimmoota ijoo irratti seenessa mootumichaa gaaffii keessa galchaniifi miidiyaalee hawaasa dhaabbataadhaan uggura jira. Kessattuu yeroo wantootni miira namaa tuqan kan akka fixinsa/walirra deddeeminsa Irreechaa dabalatee mootummaan Itoophiyaa intarneetii guutumaa guutuutti cufee ture.
Ji’oota Hagayyaafi Fulbaana keessa mootummichi dhabbatoota radiyoo adunyaa kan akka sagalee raadiyoo Ameerikaafi Docheveeleefa ugguree ture. Yeroo mormiin ademsifama turetti uummuta kakaasuufi odeeffannoo facaasuu keessatti miidiyaale hawaasaafi dhaabbileen televiziyoona diyaaspoora gahee murteessa taphataniiru. Yeroo labsii muddamaa kanatti uummanni televisiyoonota diyaaspooraa ilaaluunis ta’ee odeeffannoo miidiyaalee hawaasa irraati dhoobuun dhorkameera. Labsiin kun dhaabileen mormituus miidiyaa wajjin akka wal hinqunnamne dhorkeera.
Labsiin dhaabbilee siviiki bara 2009 baye dandeettiifi hojii dhabbilee miti mootumma akkuma laamshessetti jira. Labsichi dhaabbileen siivikii galii isaani 10% ol biyya alaati argatan dhimmota akka mirga namoomaa, bulchiinsaa, nagaa buusuufi mirga dubartootaa, daa’immaniifi qama midhamtootaa irratti akka hin dalagne dhorka.
Imaammata misooma mootummaa qeequun garmalee hamaadha. Aktivistoonni kana godhan himatamaa jiru. Akka fakkeenyaatti dhaddacha Paastar Omoot Agwaa kan bara 2016ti darbe ilaaluun nidanda’ama. Paastar Omot Agwaan yeroo baankin adunyaa badii investimentii baankiin walqabatu tokko qorachuuf garee qorattuu baankii adunyaa gara Itoophiyaatti erge ture garee kanaaf afaan hiikuufi haala mijeessuun nama hojjataa tureedha. Himatni namoota lama Omot wajjin himatamanii Sadaasa darbe addaan citeera. Himatni namoota kana sadan irratti kan baname Fulbaana 7, bara 2015 ta’us kan qabamanii hidhaman garuu buufata xayyaara Booleeti Bitootessa bara 2015 yeroo sagantaan dhimma midhaan nyaatan of-danda’uu Naayiroobi Keniyaatti qophaaye irratti hirmaachuuf imalarra jiran ture.
Hidhaa seeran alaafi dararaa mana hidhaa
Humnootni tikaa mootumma, poolisoonni federaalaa, humnoota waraana, poolisiin addaa akkasumas angawoota tikaa kan siviilii uffatan dabalate hidhamtootni siyaasa akka ofirratti raga bayaniif mana hidhaa dhoksaafi ifaatti beekamutti reebichaafi dararaa heddu rawwataniiru. Namoonni mormii dhiyeenya kanarra qabamani hidhamani turan hedduun isaani mana hidhaattiifi kaampii waraanaatti reebichiifi dararaan akka irra gahee ture himatu. Dubartoonni heddus dhiibbaan saalaafi gudeedamuun akka irra gaye dubbatu. Humnoota tikaa dhiittaa kana fakkaatu raawwatan irratti qorannoofi adambni akka fudhatame wanti ibsu hin jiru.
Himatni pirojaktoonni misooma mootummaa qotee bultoota humnaan lafarra buqqisu jedhu dabalaa dhufe. Babaldhinni magaala Finffinneefi qonni sukkaara mootummaa naanno sulula Oomoo kan uummanni durii 200,000 ta’u keessa jiraatan balaa qotee bultoota humnaan buqqisaa jira jedhama. Hawaasni sulula Oomoo keessa jiraatan lafti margaa isaani jalaa mancayeera, laga Oomoos akka fedhanitti akka hin fayyadamne dhorkamaniiru. Hidhaan Gilgal gibe 3ffaan laga Oomoo duubatti argamu guutuun ji’a Amajjii keessa calqabamee jira, Kanaaf bara 2015 lolaan namtolchee tokkollee hin turre. Angawonni mootummaa bara 2016ti lolaan nigadhiifama jedhanus faallaa waadaa isaani lolaa baayyee xiqqootu ture. Lolaan laga Oomoo kun haroo Turkaanaa guutufi lafa qotiisaa lagicharra jiraniif barbaachisaadha.
Qaamota adunyaa shoora murteessa taphatan
Itoophiyaan arjoota biyya alaafi mootummoota naanooshee irraa gargaarsa guddaa argachaa jirti. Sababni isaas teessoo gamtaa Afrikaa waan taateef, gayee cimaa isheen naanno gaanfa Afrikatti taphattuuf, shoora isheen qama nagaa eegdu mootummoota gamtoomanii keessaatti taphattuuf, dhimmota farra shororkeessummaa, gargaarsaafi baqattoota irratti mootummoota dhiyaa wajjin waan hojjattuuf akkasumas guddina missomaa agarsiisa jirti jedhamuufi. Itoophiyaan baqattoota hedduuf iddoo ka’umsa, ce’umsaafi keessummeessituudhas.
Tarkaanfiin Itoophiyaan mormii dhiyeenya kana ta’an gara jabeenyaan ukkamsuuf fudhattefi labsiin muddamee labsite deeggartootashee yeroo dheera dabalate qaamota heddurra qeeqa ifaafi cimaa hin baratamne hordofsiseera. Gamtaan Afrikaafi Komishiniin mirga ummataafi namoomaa Afrikaa ibsa tarkaanfiin Itoophiyaa nuyaadessera jedhu baasaniiru. Paarlaamaan Awurooppa seeraafi ijannoo cimaa tokko gadhiiseera. Seeneetifi manni maree bakka bu’oota Ameerikaas ibsa cimaa tokko beeksiseera. Komishiniin mirga namooma mootummoota gamtoomani ajjechaa ji’a Adoolessa humnootni tika mootumma fudhatan irratti qorannoon qaama adunyaafi of-danda’ee akka barbaachisu ifatti jala muree gaafateera. Arjoonii biroon akka baankii adunyaa akkuma waan humtu hin taaneetti ibsa ifaafi yaaddoo tokko otoo hin baasiin hojii isaani baratame itti fufanii jiru.
Ji’a Waxabajjii keessa Itoophiyaan qaama naga eegsistu mootummoota gamtoomani taate filatamtee jirti. Garee mirga namooma addaa mootummoota gamtoomanii wajjin hojjachuuf fedhii akka hin qabne seenasheerra osoo beekamuu mana maree mirga namooma mootummoota gamtoomaniitis itti aana pirezedantii taatee jirti. Gayee kana hunda otoo achi keessa qabduullee Itoophiyan gareen mirga namooma addaa mootummoota gamtoomanii akka biyyashe hinseenne dhorkiteerti. Gareen mirga namoomaa addaa mootummoota gamtoomani Itoophiya kan seenan yeroo dhumaaf bara 2006, yeroo gareen dhimma Eertira qoratu dhaqe qofa ture.
Odeeffannoo dabalataaf Gabaasa Human Rights Watch bara 2017 dubbisuu dandeessa.
Yerooblog	Freedom of Expression, Horn of Africa, Human Rights, Opinions	Leave a comment January 12, 2017 January 19, 2017 6 Minutes
Ogeessa Information Technology kan ta’e, Abdiisaa Beencaa Jaarra, komaandi poostiitiin akka qabame dubbatamaa jira
Ogeessaa Information Technology fi dizaayinara moosaajii (software) kan ta’eefi Afaan Oromoo afaan teeknoolojii akka ta’u hojii gurguddaa hojjechaa kan ture, Abdiisaa Beencaa Jaarra, komaandii poostiin guyyaa hara’a akka qabame gabaafmeera. Abdiisaan eessaa akka jiruufi haala akkamiira akka jiru hin beekamne.
BREAKING: Sources say @abdisabnch39, activist and founder of Oromo ICT, has been detained by the command post. His whereabouts unknown. pic.twitter.com/Iv4tTsuuX3
— Girma Gutema℠ (@Abbaacabsa) November 23, 2016
Mootummaan Itoophiyaa, erga labsii hatattamaa (state of emergency) labse asi Oromoota kuma 50 ol qabuun, kaamppii waraanaa adda addaatti dararaa akka jiru ni beekama. Mootummaan Itoophiyaa, Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraayiin durfamu, miidiyaa ofii to’atuun namoota kuma 11 ol akka to’anna jala oolan beeksiseera.
Abdiisaa Beencaa Jaarraa eenyu? ( Beekan Gulummaa Irrenaa tiin akka barreeffametti)
Abdiisaan Ogeessa koompiwutaraa (IT Specialist/Programmer/App Developer) yommuu ta’u, Barnoota koompiwuutaraatiin (Information Technology) dhaan xumura bara 2013, Yuunbaristii Haramayaa irraa eebbifame. Hojiisaarraa ka’uun namootni hedduu Abdiisabaa jedhuun. Abdiisaan eebbasaa booda boqannaaf gara maatiisaa kan deeme yoo ta’u turtii ji’alamaa booda Kaampaniin Moosajii(Software Company) kan lammummaan isaa nama USA tokko hojiidhaaf yaame. Abdiisaan gaaf sanarraa kaasee dhimma jireenya dhuunfaa lafa kaayee, saba kootiif maal gumaacha,Ogummaa kootiin maal fayyada, yaada jedhutti seene.
Kanaanis namoota naannotti argu keessattuu magaalaa Finfinnee fi namoota sab-qunnamtiilee hawaasummaa garagaraa irratti hirmmatan ilaaluun Rakkoolee namootni heddu Afaan Oromoo irratti qaban (dubbisuu, dubbachuu fi barreessuun) jiraachuu hubate. Abdiisaan hubatee qofa hin dhiifne; kun sababa maaliitiif waan jedhus xiinxalle. Xiinxalla kanaanis namootni irra caalaan rakkinna dhuunfaa osoo hin taane rakkoolee iddoo itti baratan dhabuu, wantarraa baratan dhabuu (Resource accessiblity) akka ta’e hubate. Kunis, Gabaabbinnan Afaan kana iddoo fi saa’aa barbaadanitti argachuun akka hin danda’amne kan bare Abdiisaan furmaatni maal jedhee of gaafate.
Haala kanaan dhaadannoo “Afaan Oromoo afaan saayinsii fi teekinoolojii haa taasifnu.” jedhuun as bahe. Kanumarraa ka’uun yeroo gabaabatti namootni biyyoota garagaraa jiraatan fayyaduu akka danda’anitti yaadee hojiilee armaan gadii kanneen gad baasuu eegale:
Fayyadamaa Mobaayilaa(Mobile App) maqaa “Afaan Oromoo Baradhaa” jedhuun Google Play Store irratti gad lakkise. Fayyadamaan(Appn) kun seerluga Afaan Oromoo kan barsiisu yommuu ta’u qabiyyee boqonnaa torba( Qubee A,B, C… irraa kaasee hanga Sirna Tuqaaleetti) kan of keessaa qabuudha.
Ammas osoo hin turin Fayyadamaa Mobaayilaa(Mobile App) maqaa “Qubee Afaan Oromoo Sagaleen.” jedhu gad lakkisuun Hawaasni addunyaa guuturra jirtan daa’imarraa hanga guddatti jalqabarraa kaasaa baradhaa, amma booda Afaan Oromoo iddoon itti baradhu dhabe namni jedhu akka hin jiraanne jedhe Abdiisaan.
Abdiisaan Sab-qunnamtii hawaasummaa irrattis keessattii Facebook Gubbatti Garee “Afaan Oromoo Haa guddifnu! ” jedhu ijaaree kan miseensa namoota 8000 ol qabu irratti guyyaa guyyaan Qubee irraa eegalee dhimmi guddinni Afaan Oromoo yeroo hunda kan irratti barsiifamu too’achaa jira.
Hawaasni addunyaa garagaraa Abdiisaa wajjiin walbaruu jalqaban, Gaafiin barnoota Afaan Oromoo nu barsiisuu qabda jedhu hedduumachaa dhufe. Abdiisaan tole jedhee fudhate, Garee Whatsup “Afaan Oromoo Haaguddifnu!” jedhu uume Barnoota Afaan Oromoo Qubeerraa jalqabuun barsiisutti seene. Gareen kun yeroo muraasatti miseensa hanga nama dhibbaa horate. Abdiisaan rakkoolee fi bu’aa ba’ii jireenya dhuunfaa dagatee barnoota kanarratti xiyyeeffatee ji’a 4-5tti miseensotni garee kanaa. Haala kanaan turtii ji’a 4-5 keessatti miseensotni garee kanaa dubbisuu, barreessuu, dubbachuuf dubbisuu xumuran. Kanaanis Abdiisaan hojii boonsaa hojjate Miseensa Gammachiise.
Ammas itti fufuun Abdiisaan wanta murteessaa fi barbaachisaadha jedhe torbaanuma keessa jirru kana Fayyadamaa Moobaayilaa(Mobile App) maqaa “Jechoota Hayyoota Oromoo” jedhu kan jechoota hayyoota 80 ol of keessaa qabu kinoo gad lakkisee jira.
Maal kana qofa Abdiisaan Hojii ijoo tokko qabatee dhufeera. Innis dhaadannoo ganamaa tan “Afaan Oromoo Afaan saayinsiif teekinoolojii haa taasifnu!” jettu sana gara “Dhimma keenyaaf teenyee nama biraa eeguun salphina!” jedhutti jijjiirrun dhimma guddina Afaan Oromoo irratti sochii garagaraa gochuu irraan darbee dargaggoota heddu kakaaseera, bu’uura afaan kanaa lafa kaayuu qabna jedhee bu’aa bahii heddu ce’ee bahaa ture, kanaanis garee adda addaa lama ijaaree jalaa jigus/ bittannooftus, har’a garee sadaffaa maqaa “Qubee Technologies” jedhuun kan miseensa dargaggoota sha(5) of keessaa qabu ijaaree hojitti seenanii jiru.
Kaayyoon Gurguddoon Garee kanaa:
Afaan Oromoo iddoo fi yeroo barbaadametti argachuuf akka danda’amu gochuu, itti fayyadamsiisuu, hordofuuf too’achuu.
Afaan Oromoo bifa barbaadameen:
Suur-sagaleen barsiisuu(Video tutorial)
Barreeffamaan barsiisuu(Written tutorial)
Fayyadamaa Moobaayilaatin(Monbile App)
Aadaa nyaataa, uffannaa, ayyaanaa fi kkf Oromiyaa naannolee garagaraatti argaman qorachuuf ifa baasuu
Waaltina Jechoota Afaan Oromoo irratti hojjachuu
Mosajiilee(softwares) adda addaa afaan kanarratti hojjachuu
Dogoggora asiin dura ture kanneen barreeffamaan Google irra jiran sirreessuu, Hedduun kan oli hin kuufamin waan ta’eef olkuusuu.
Haala kanaan Abdiisaan guddina Afaan Oromoo keessatti gahee seena qabeessa hojjachaa kan jiruu fi gara fuulduratti hojii boonsaa saba isaatiif lafa buusuu akka danda’u ibsaa, Abdiisaan yeroo ammaa kanas bifa alkallattiidhaan Guddina Aartii adda addaa keessattis hirmaannaa akka “Graphics design adda addaa, promotion design adda addaa fi Design Uffataarratti hirmaachuun gahee isaa bahaa jira.
Abdiisaan ykn Abdiisabaa gara fuulduraatti Kaampanii dhuunfaa ofii banatee hawaasa isaas tajaajilaa jiraanya ofiis gaggeessu abjochaa jira.
Dhumarratti Ogeessi dhamaatii adda addaa keessa darbee sabaaf jiraachaa jiru kun, jiraachuuf jecha guyyaa hojii Mootumaatti dadhabaa oolee, halkanimmoo hirribasaa dhiisee sabasaatiif jiraachaa akka jiruufi dadhabbii kana hunda tajaajila Bilisaatiin hojjachaa jiraachuu ykn hojiilee akkanatti itti dadhabe ykn dadhabaa jiru kanaf galiin argate akka hin jirre hubadha.
Yerooblog	Human Rights, News & Views, Oromia &Ethiopia, Oromo Protests, Politics	Leave a comment November 23, 2016 November 23, 2016 3 Minutes
Yerooblog	Opinions, Oromia &Ethiopia, Oromo Protests, Politics	Leave a comment August 11, 2016 3 Minutes
Maal Baranne, Maalitti Tarkaanfanna?
Dr. Solomoon Ungasheetiin
Ummatni Oromo Hagayya 6, 2016 gochaa seenaan barabaraan yaadatamu galmeesse. Oromiyaa mara keessatti hiriiree “ajjeechaa nurraa dhaabaa, biyya keenya keessatti ofiin of bulchinee nagaan ha jiraannuu, humna waraanaa nurraa kaasaa, lammiiwwan keenya mana hidhaa keessatti dararaa jirtan nuuf hiikaa, lafa keenyarraa nu buqqisusuu dhaabaa, biyya keenya irratti abbaa biyyaa ta’uu keenya baraa” jedhanii bakka hundatti sagalee isaanii dhageessisani. Seenaa Oromoo keessatti guyyaan kana fakkaatu kana dura hin argamne. Seenaa addunyaa keessattis, har’a dura biyya akka Oromiyaa bal’atu keessatti ummatni miliyoonotaan lakkaawwamu guyyaa tokko waliin hiriiree sagaleesaa dhaggeeffachuu dhagayes, dubbisees hin beeku. Hagayya 6, seenaa Oromoo keessatti qofa otuu hin taane, seenaa addunyaa keessatti iddoo ol’aanaa qabaata. Ummatni Oromoo bakka jiru hundatti boonuu qaba.
Gama kanbiraan Hagayya 6, 2016 guyyaa gaddaa ta’ee barabaraan yaadatama. Lammiiwwan lakkoobsaan 50 ol ta’an haala suukaneessaa dhaan ajjeefamanii wareegama bilisummaa ta’aniiru. Dhibbootaan kan lakkaawaman madaayaniiru. Lakkoobsi isaanii kan hin beekamne mana hidhaa galaniiru. Maatiif firri, ollaaf biyyi, gaddaa jira. Bahaa hanga lixaatti, kaabaa hanga kibbaatti Oromiyaan maatii gaddaa jiru ta’uun ifaadha. Isa kanas seenaan barbaraan yaadata. Gadda kana keessaa bawuun kan danda’amu injifannoo booda.
Hagayya 6, 2016 maal nu barsiisee darbe? Akka ilaalcha kootti, barnoootni tokkooffaan, Oromoon dammaqee mirga isaaatiif falmachuuf ka’uu isaati. Bara Oromiyaan harka diinaa galte sana, Oromoon wal hin beeku ture. Gabroomfataan nu keessaa garii yeroodhaaf firoomfatee, isaa kaan diinomfatee tokko tokkoon biyya keenya dhuunfate. San booda hunda keenya gabroomse. Seenaa kana gaddaan yaadanna. Amma sun jijjiiramee Oromoon tokkoomee kutannoo guddaa dhaan ka’eera.. Addaddatti qoodamnee irbaata diinaa ta’uun hafeera. Gabroomfamnuus, bilisoomnus kana booda walumaan dhaabbanneeti. Dhugaan kun Oromiyaa bal’oo keessatti Hagayya 6, 2016 dhiigaan barreeffamee seenaa dhaaf gabaafameera.
Kan lammataa maal baranne? Akka ilaalcha kootti, diinni mirga keenya nu sarbee jiru garalaafina takkallee akka hinqabne ta’uu isaati. Hanga Oromiyaa bakka addaddaatti dhiigni dhangala’uu dhagahutti, mootummaan wayyaanee har’a akka kaleessaa ummata nagaarratti dhukaasa hin bantu ta’a shakkii jedhun qaban ture. Shakkiin koo sun Hiriirri Oromoo Guddichi jalqabamee saatii tokko otuu hin guutin deebii ani dhagawuuf eegaa hin turre argate. Diinni duruu diinuma ta’uun balaqqiin ifee natti muldhate. Lammiiwwan akkuma kootti hubatan hedduudha jedheen amana. Kana booda shakkiin takkayyuu jiraachuu hin qabu. Mootummaan wayyaanee aangoorra turuuf ummata nagaa miliyoonotaan lakkaawaman ajjeesuu irraa boodatti hin deebi’u. Barnoota kana ummatni Oromoo barateera jedheen amana.
Edda kana ta’ee kana booda maalitti tarkaanfanna? Gaaffii kana gaafachuun gowwaa nama fakkeessa. Deebiin ifa waan ta’eefi. Sanganiyyuu qalachuuf yeroo yaalan lubbuu isaa hambifachuuf nidhidhiitata mitiii? Ilmii namaas ajjeefamuu irraa of hambisuu filachuun gaaffii maalii qabaree? Gowwaa nama fakkeessuyyuu yeroon ammaa kun kan itti gaaffii kana itti wal gaaffanu. Deebiin ummata Oromoo maal akka ta’e hunduu beeka waan ta’eef, himuu hin barbaachisu.
Haala keessa jirru irratti edda waliigallee, maal godhuu akka qabnu wal gaafachuu qabna. Kana yeroo goonu dhugaa ifa nutti fakkaatu wal sodaa tokko malee walitti himuun dirqama ta’a. Hubannoo kanarraa ka’een waan dhugaa natti fakkaatu kana gaditti barreessa. Garii namaa gaddisiisuun koo akka hin oolle durseen beeka. Kanneen natti gadduuf jiraniin durseen dhiifama naa godhaa jedhaan.
Egaa waan yaada koo keessa guutee jiru futtaafachuufan jedhaa na hoofkalchaa. Dursee, Haylee Fidaa gooticha Oromoon yaadadha. Waggaa lama wal wajjin mana hidhaa tokko keessatti edda hidhamnee booda na biraa fuudhamee ajjeeffame. Maaliif maqaa nama du’ee kaafta kan naan jettan yoo jiraattan, deebiin koo gabaabaadha. Haylee Fidaa, “Sabni dammaqee, dhaabaan gurmaawee, hidhannoo argate nihinjifata” jedha ture. Jechii isaa kun haala amma Oromoon keessa jiru wajjin kan walqabatu waan ta’eefan maqaa nama du’ee kaase. Akkuman olitti tuqee ture, Oromoon dammaqeera. Dhugaa kana lammiinis, halagaaniis sirriitti hubateera. Lamiin yeroo gammadu halagaan soda keessa galee jira. Kun dhugaa shakkamuu hin danda’amne natti fakkaata. Haalduree hinjifannoo sadan Haylee Fidaa lafa kaa’e keessaa tokko guutee argameera jechuudha. Hundi keenya kanaaf gammaduu qabna.
Haaldureen lammataawoo guuteera? Akka ilaalcha kootti hin guutne. Qaamni uumati kallacha qabsoo Oromoo jedhee ilaalaa ture, waggoota 25an darban of diigaa ture. Qaamni tokko bakka afur-shanitti wal qoode. Kun anaaf yaadannoo gaddisiisaadha. Ta’us haalli abdachiisaan dhiyeenya dhalachuu dhageenyee jirra. Innis, qaamooleen ABO irraa caccaban “waliigaltee uumne jedhanii labsuu isaaniiti.” Garuu labsiin labsamuu malee jiijjiramni muldhataa hin jiru. Kanaaf, an ammayyuu yaaddoo keessan jira. Dhaabni siyaasaa ummatni abdii guddaa irratti qabu kan biraa KFOdha. KFOn har’a haala maal fakkaatu keessa akka jiru hundi keenya beekna. Hoggantoota isaa keessaa 90% mana hidhaa keessatti darararamaa jiru. Miseensotni kumootaan lakkaawamnis isaanuma wajjin jiru. Waajjiraaleen dhaabicha, Finfinnee irraa kan hafe bakka hundatti cufamanii jiru. Dhugaa kana yeroon barreessu gadda guddaatu natti dhagahama. Kana booda KFOn Oromiyaa keessaatti seeraan socho’ee kaayyoo isaa fiixaan baasuuf eeyyama mootummaa ni argataa jennee wal gaafachuu qabna. Ana natti hin fakkaatu. Egaa maal wayyaree?
Waa sadii hatattamaan hojiirra oolchuun dirqama yerooti jedheen amana. Inni jalqabaa dhaabilee siyaasa Oromo ilaala. Inni lammataa ummata Oromoo hunda ilaala. Sadaffaan Oromoota biyyaa Oromaa jiraatan irratti xiyyeeffata.
Dhaabileen siyaasaa maal godhuu qaban? Waliigaltee uumne jedhan sana jiruu dhaan agarsiisuu qabu. Hamma ammaatti waliigaltee uumneerra jechuu malee, waliigalteen sun maal akka ta’e ummataaf ifa kan ta’e natti hinfakkaatu. Kana booda maqaa wal hinxureessinu jechuu qofaa? Moo fuulduree Oromiyaa fi Itoophiyaa irratti mariyatanii waliigalaniiru? Deebiin isa lammataa kana yoo ta’e, wanti isaan irratti waliigalan maanni? Hojiirraa oolchuuf ammoo sagantaa maal fakkaatu qopheeffatan? Bor qabsoon ummatni aarsaa guddaa itti baasaa jiru milkaawee mootummaan abbaa irree aangoorraa yeroo ariyatamu biyyattiin akkamiin akka bultu irratti waliigalaniiruu? Ummatni deebii gaaffiiwwan kanaa hatattamaan baruu qaba. Deebiin hin jiru yoo ta’e, waliigalteen uumamte jedhamte sun akkuma ULFO taatee achumaan baduun ishee hafa natti hin fakkaatu. ABO, ADO fi dhaabileen lamaan hafan deebii waliigaltee nuuf ha kennani.
Ummata Oromoo biyya keessa jiru, keessumaa qeeroo, irraa maaltu eegama? Dirqamni guddaan natti muldhatu bakka bakkatti haala amma caaluun wal ijaaruudha. Wal ijaaruu jechuun koo wal kakkaasanii hiriira waliin bawuu qofa miti. Inni ammayyuu itti jirama. Ijaarsa bor yeroo ummatni injifannoo argatu bakka bakkatti biyya bulchuu danda’u uumuu barbaachisa jechuu kooti. Ijaarsi akkasii qaamolee adda addaa of jalaa qabaata. Fakkeenyaaf, kan bulchiinsaa, kan nageenyaa, kan ittisaa, kkf. Gabaabumatti ijaarsa gulantaa gandaatti, aanaatti, godiinaatti dirqama bulchiinsaa bawuu danda’u jechuu kooti.
Oromoo biyya alaa jiru iraa maaltu eegama? Dirqamni guddaan qabnu ummata biyya keessaatti diina dura dhaabbatee abbaabiyyummaaf falmaa jiru haala qindaawaa fi ittifufiinsa qabuun deggeruudha. Jiruun bor otuu hin ta’in har’a jalqabuu qaba. Garee qabsaawota godiinaalee Oromiyaa keessa jiran wajjiin hariiroo uumuudhaan deggersaa biraan gawuu danda’u godiinaa hundaaf uumuu barbaachisa. Fakkeenyaaf garee godiinaa Arsii Lixaa irratti xiyyeefatee qabsaawota godiina sana jiran wajjin hojjetu. Godiinaalee hafaniifis akkasuma.
Akkanaan hojjechuun waa lama gargaara. Tokkoffaa ijaarsiif qabsoo walfakkaataan bakka hundatti akka jajjabaatan taasisa. Lammaffaa godiinaaleen hundi quba walqabaatanii waliin akka socho’an jajjabeessa. Jiruu kana fakkaatu hojjechuuf Oromoon biyya Oromaa jiraatu bakka hundatti walgayii godhachuun itti mariyatee ejjennoo tokkorra gawuu qaba. Walgayii akkanaa qopheessuuf gareen qindeessu tokko dhaabbachuu qaba. Gareen kun karoora baasee walgayiin Hawaasaa Oromoo Ameerikaa Kaabaatti, Auroopaatti, Awstraaliyaatti, Akkasumas Biyya Araabaatti haala walfakkaataa dhaan akka qophaawu taasisa. Ejjeennoon walfakkaatu akka fudhatamu taasisuuf jiruu barbaachisu hojjeta. Dhimma kanarratti Oromoon biyya Ormaa jiraatu mariyachuu qaba.
Yerooblog	Oromia &Ethiopia, Oromo Protests, Politics	Leave a comment August 11, 2016 August 11, 2016 5 Minutes
It is to be recalled that the Oromo people have been expressing their total and complete discontent with the administration over the last eight months and a half. This expression has taken the form of peaceful protest (#Oromoprotests) forcing the government to rethink the Addis Ababa Master Plan, amend the Oromia Urban Development Proclamatio, reschedule the Ethiopian School leaving Exam and, more recently, to stop dumping waste in the Sandaafa area. Much to our disappointment and to the disappointment of the entire Oromo nation, this peaceful popular protest has been consistently met with overt violence from the Government’s security forces.
The fundamental demands of Oromo people remain unaddressed. Discrimination is rife. Economic disempowerment, political marginalization, total loss of voice is patent.
This letter shall have served as a letter of notice to the relevant State and Federal institutions. If Oromia’s and Federal Security Forces try to disrupt, subvert, or prevent the protest rallies or if they try to abuse people otherwise during and before the demonstrations, from that moment on, the Oromo Protest will immediately have entered a new phase with a new mission and strategy.
It shall start taking measures commensurate to the needs of the times. TPLF leaders and Oromo collaborators–and they alone–shall take full responsibility for any and all negative consequences.
Desperate times demand desperate measures. We call upon the regime to end our people’s sufferings immediately. We also call upon the Ethiopian people in general to pay attention to this notice, to bear witness, and to stand in solidarity with its Oromo brethren and sisters.
Yerooblog	Oromia &Ethiopia, Oromo Protests, Politics	Leave a comment August 3, 2016 7 Minutes
CINAA QAAMA KEENYAA OROMOO MATAKKAL HAA YAADANNU , KUTAA 1FFAA
Obbo Boruu Barraaqaatiin
Oromoonni Matakkal gosa Oromoo Maccaa jalatti beekamu. Kufaatii Dargii dura kutaa Gojjaam keessatti waamamuu turani. Yeroo ammaa ammoo Naannoo Bulchiinsa Beenishaangul jalatti bulaa jirani. Akka qorannoon seenaa manguddoota Oromoo naannoo kanaa irraa sassaabame ibsutti, akkaataan qubsuma ummata keneya kanaa bifa lama kan hordofe ture. Kan duraa gama Baha Wallaggaa irraan Dangab yookiin Dibaax naannoo jedhamu kan qubatanii dha. Kan lammaffaa ammoo gama Dhiha Wallaggaa lafoota akka Najjoo, Gidaamii, Muggii, Boojji fi Sibuu irraa laga Abbayyaa cehanii bakka amma Wanbaraa jedhamu kan qubatani. Kun kan tahe jaarraa 16ffaa yeroo itti Oromoon daga isaa duraan halagootaan qabatamee ture deebisee toyachuuf bal’inaan sosso’aa ture san irraa eegaleeti jedhama.
Oromoonni yeroo ammaa bulchiinsa naannoo Benishaangul Gumuz jalatti bulaa jiran miidhaan sabummaa irra gahaa jiraachuu dubbatu. Akka fakkeenyaatti rakkoolee gurguddoo ummatni Waanbaraa himachaa jiru haa laallu.
Akka dargaggoonni Oromoo naannoo kana keessatti dhalatanii hiree barnoota olaanaa argatan qorannoo geggeessanitti, yeroo ammaatti akka Oromootti jiraachuun Oromoota Waanbaraa gaaffii keessa galee jira. Kana kan nama jechisisu keessa qabxilee muummee ta’an tokko tokko tuqun barbaachisaa dha. Isaanis:
• Jaarroleen biyyaa bara 1987 hanga Finfinneetti dhufanii waa’ee Oromoon mirga dhabuu iyyatanillee hiika hin arganne;
• Bara 1986 waraanni irratti banamee namootni heeddun dhumaniiru, manni gubateera, qabeenyis barbadaa’ee jira;
• Namni 30 Naqamteetti ergamani Afaan Oromoon leenjii barsiisummaa argatanii yoo deebi’anis ‘Kun biyya Oromoo miti, yoo barbaaddan biyya isaa dhaqaa barsiisaa, kanaan achi yoo waan biraan leenjii keessan hin fooyyessitan ta’e Afaan Oromootiin hojii hin argattan’ jedhamanii waan baratan gatii akka dhabu godhamee jira;
• Uummatni martinuu yeroo saba isaatiin gurmaa’u Oromoon dhorkamee jira. Qaama Dh.D.U O irraa namootni Oromoota Waanbaraa gurmeessuuf dhufan qaama aanaa kanaan ari’amanii tarkaanfiin tokkoyyuu hin fudhatamne;
• Oromoon dhaloota biyyaa ti malee abbaa biyyaa miti (ye haager tewallajji injii ye haager baale beet ayidellem) jechuudhaan erga abbaan biyyaa argaate dhuftuun (maxxee) irratti dhalatte ammo argatti jechuun ijoolleen Oromoo carraa barnoonta ol aanaa fi hojii akka hin arganne balballi itti cufameera. Haala adda addaan utuu sabummaan isaanii hin beekamin yoo miliqanii keessa darbanis guddina akka hin arganne godhamuudhaan gocha Afriikaa Kibbaa durii waliin wal fakkaatu naanichaan raawwatamaa jira;
• Mirga hawaasaa fi siyaasaan alas gama dinagdee fi haaqa seeraan loogiin hojjetamu Oromummaa Oromoota aanaa kanaa irratti dhiibba guddaa gochaa jira.
• Ijoolleen Oromoo filmaata dhaban Oromummaa isaanii jijjiiranii Sinishuummaatti galmaa’uudhaan hojii argachuuf dirqamaa jiru. Kunis uummaticha haasofsiisuun kan mirkanaa’uu danda’amuu dha; akkasumas,
Uummatni Oromoo baayyinni isaa akka lakkoofsa bara 1984tti (A.L.A) koonyaa Matakkalaa harra zoonii ta’e keessatti 55,501 ture, yeroo lakkoofsa bara 1994 (A.L.A)tti waggaa 10 keessatti 3,332 qofa dabaluun 58,833 qofaa ta’ee jira. Kunumtuu yeroo akka Goojjamitti bara 1984 (A.L.A) lakkaa’ame kan Oromootin zooniilee Kamaashii fi Asoosaa itti hin dabalamin 55,501 ture. Kun akkamittiin gurmuudhaan kan Oromoo Waanbaraa caalan Oromootni zooniilee lamaa itti dabalamaanii haala baayyinni uummataa Itiyoophiiyaa keessaa itti dabalaa ture % 2.9 tiin kan Oromoo Benishaangul gumuz keessa jiruu garuu kana duwwaa ta’e gaaffiin jedhu deebii hin arganne.
Ummatni Sinichoo duris ammas zooniidhuma Matakkalaa aanaaleedhuma durii sadan armaan olitti eeraman keessa qofa jiratu. Garuu lakkoofsa bara 1984tiin (A.L.A) 17,840 ture irraa bara 1994 (A.L.A) waggaa kudhan keessatti 14,265 dabaluudhaan gara 32,105tti ol guddachuun isaanii lakkoofsi Oromoo garuu akka gadi qabamu loogiin godhamuu isaa sirriitti mul’isa. Utuu dhugaadhaan %2.9 tiinuu shallagamee (projection) Oromoon Zoonii Matakkalaa utuu warra zoonii kaaniiyyuu hin dabalatin gara 74,588tti, kan Sinichoos gara 32,105tti utuu hin ta’in gara 23,975tti guddata ture. Amma garuu kan mullatu Oromoon waggaa kudhan keesaa % 1 gadiin, Sinichoon ammoo % 6 tiin akka dabalaniidha. Kun ammo kan dhugaa irraa baayyee fagaatee ta’uun isaa ifa.
Kutaa 2ffaa barruu kanaa keessatti furmaata malu irratti xiyyeeffanna.
• Manguddoota biyyaa naannichaa
• Waraqaa qorannoo eebbaa (dissertation) barattoota Oromoo dhalootaan naannoo sanii
• Central Statistical Agency of Ethiopia
Dura kan Maxxane ture Oromia Online gubbaatti.
Yerooblog	Opinions, Oromia &Ethiopia, Politics	Leave a comment July 29, 2016 2 Minutes
Kan Barreesse : Abdii Maty
Magaalaa guddaan biyya tokkoofis ta’e naannoo tokkoof guddina siyaas dinagdee, afaan fi hawwaasummaa sabaa guddisuuf barbaachisaadha. Itiyoophiyaa keessatti bara 1991 booda sabaaf sablammiin biyyattii mirga ofiin of bulchuu erga argataniin booda naannoo isaaniitti magaalaa giddu gala siyaasaa fi hawwaas-diinagdee isaanii calaqisiiftu filatanii guddinni qabatamaan hedduunis magaalota isaanii irratti muul’achuun isaa ragaa qabatamaadha.
Uumama magaalotaatiif; giddu galli daldalaa, iddoo waaqeffanna, walitti hidhamiinsa qomoo, seenaan hawwaasni naannicha waliin qabu fi filannoo mootummaa ykn bulchiinsa naannichaa sababa ta’uu danda’u. Gama biroon itti dhiyeenyi bu’uuralee jireenyaaf barbaachisanii kanneen akka bishaanii, geejiba, hala teessuma lafaa fi haalli qilleensaas daran murteessadha.
Naannoleen salgan biyya keenyatti argaman hundi magaala mataa isaanii erga bu’uureffataniin booda guddina qabatamaa hedduu akka argisiisan akkasumas guyya guyyaatti argisiisa akka jiran namni carraa argatee baroota adda addaa keessatti daawwate bal’inaan ibsuu danda’a. Naannoleen magaalaa mataa isaanii qabaachuun siyaasa, diinagdee, hawwaasummaafi dhiyeessi bu’uraalee jireenya barbaachisoo akka argataniif daran isan gargaareera.
Naannoolee biyya keenya keessatti argaman maraa keessa naannoon magaalaa guddaa hin qabne naannoo Oromiyaati yoo jenne soba miti. Magaalota hundaa naannolee adda addaa keessatti afaan hojiifi afaan bal’inaan dubbatamu afaan uummata naannichaati. Hanga ammaatti namni kallattiidhaan dhugaadhumatti magaalaan Oromoodhaaf handhuura taate kami jedhee gaafate yookaan gaaffii kana kallattiii hundee gadi fagoo qabuun kaase waan jiru natti hin fakkaatu. Namootni hedduun magaalaan guddittiin Oromiyaa Finfinnee dha jechuu danda’u. Haa ta’u malee, dhugumatti Finfinneen maqaaf yoo ta’e malee magaalaa guddittii Oromiyaati?
Finfinnee mitii magaalotumti xixiqqoon Oromiyaa keessatti argaman dhibbantaa 80 ol eenyummaa Oromummaa hin calaqisiisan. Magaalotni hedduun Oromiyaa keessatti argaman Nagallee, Asallaa, Jimmaa, Adaamaa, Shashamannee, Mattuu, Harar, Dirre Dhawaa, Naqamte, Bedellee, Adaabbaa, Roobe fi kkf’n afaan isaan ittiin waliif galan afaan Amaarati.
Hundeeffama ishee irraa kaaftee fedhi uummata Oromootiin Finfinneen akka hin hundeeffamne saba Oromootiif ifa galaadha. Magaalaan Finfinnee fedhii uummata naannichaa ykn abba biyyichaa giddu gala godhachuun hundeeffamuu dhabuun’ eenyumaa isheen har’a calaqisiiftuu; afaan, seenaa, faca’iinsa hawwaasa( demography) akkasumas amantii isheen hordoftu akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenya. Finfinneen, Oromiyaa keessatti argamtus ulaagaa fi amala magaalaa gudditti Oromiyaa ishee gochuu danda’u tokko illee hin qabdu; akka qabaatuufis hojiin hojjetame tokko illee hin jiru.
Giddu gala siyaas-diinagdee fi hawwaasummaa dhabuun uummata keenya kallatti hedduun akka inni midhaa jiru meeqan keenyatu quba qaba laata? Sabni bal’aan kun magaala bakka isa bu’uuf isa calaqisiisu dhabuun kallattii hedduun rakkina qabatamaa hedduu kaasuu dandeenya.
1. Abbootiin qabeenyaa Oromoo waliin ta’uun hojii aksiyoonii babl’aa uumuu akka hin dandeenye sababa ta’eera
2. Oromootni godinaalee Oromiyaa addaa addaa keessa jiraatan wal irraa fagaatanii akka hafan sababa ta’eera.
3. Adda addummaan ilaalchaa xixiqqaan jiru waltajji tokkummaan walitti dhufanii mari’atan dhibuu isaa irraa kan ka’e yeroo dheeraaf osoo hin hiikamin akka jiraatan sababa ta’eera.
4. Afaan Oromoo sadarkaa guddinaa barbaachisu irra akka hin geenye gufuu ta’eera. Kana jechuun afaan Oromoo har’a ifajjii fi wareegama hedduun guddachaa jiru osoo naannoo bal’inaan uummatni Oromoo godina hundaa irraa walitti dhufe keessa jiraatu argate xinqooqaa isaafis ta’e maxxansaalee adda addaa kannneen akka gaazexaa, asoosama fi al-asoosamni barreefaman bali’innaan dubbifamuu danda’u barreesitootafis gabaa bal’aa ta’uudhan hamilee barreessuu isaani kakkaasuuf gumaacha ol-aanaa taphachuu danda’a ture.
5. Sochii fincila diddaa garbummaa uummatichi godhu deggeruun dhibbaa siyaas-diinagdee jabaa mootummaa irraan ga’uun akka hin danda’amne taasisee jira. Kunneen fakkeenyaaf kanneen caqafamaniidha.
Rakkoowwaan kana irratti hunda’uun uummatni, beektotni, miidiyaaleen addaa adda ilmaan sabichaatiin hundeefamanii fi jarmiyaaleen siyaasaa Oromoo marti rakkoo kana hatattamaan waltajjii mariitti fiduudhaan uummmatni kun bifa inni ittiin giddu gala siyaas diinagdee akkasumas hawwaasummaa jabaataa qabaachuu danda’u irratti kallatti dhawachuun daran barbaachisaadha jedheen amana. Kanumaan walqabsiisee yaadota armaan gadii akka ka’umsaatti kaasuun fedha:
1. Daran barbaachisummaa magaalaa guddaa hubachuun uummatni keenya kallattiii hundaan haala itti magaalota gurguddoo naannoo keenya keessatti argaman Finfinnee dabalate dhunfachuu dandeenyu irratti qorannoo, marii fi toftaa adda adda gad fageenyaan dhiyeessuun barbaachisaadha.
2. Mootummaa naannoo fi biyya bulchaa jiru irraatti dhibbaa jabaa gochuun gaaffi fininsuu.
3. Dhimmi kun kallatti danda’ame hundaan qalbii uummata Oromoo hundaa bira akka ga’uuf midiyaalee argaman hundaatti fayyadamuun barreessu, dubbachuu fi dhadheessu
4. Fincila Xumura Garbummaa (FXG) godhamaa jiru keessatti akka gaaffi ijoo tokkotti qabatamee irratti hojjetamuun kanneen fala ta’u jedhee amanuudha.
Yerooblog	Oromia &Ethiopia, Politics, Social Commentary	Leave a comment July 28, 2016 3 Minutes
Yaya Beshir (Boruu Barraaqaa, Dubbataa ABO duraanii irraa)
Obbo Daawud Ibsaa, hogganaa Adda Bilisummaa Oromoo
Obbo Leencoo Lataa, hogganaa Adda Dimokraatawaa Oromoo
Obbo Abbaa Nagaa Jaarraa, hogganaa Adda Bilisummaa Oromoo Tokkoomee
Janaraal Kamaal Galchuu, hogganaa Kallacha Walabummaa Oromiyaa
Haa tahu malee har’a akka hogganaatti eessa jirra jedhaa wal gaafadhaa. Jaarmayaa jabaa miliyoonota dammaqan kana hiriirsee seenaa hojjechuuf irree gahaa qabu ijaaruutti hin jirtani. Haala amma jirru keessatti osoo diinni raajii wayiitiin aangoo irraa bu’e jedhamee, caasaa ititaa Oromiyaa ittiin toyattan harkaa hin qabdani. ABOn dur bara dukkanaa sanayyuu Oromoo maraaf daaw’itii tahuutti beekama ture. Kan dhalli Oromoo kutaa kamiiyyuu isa keessatti of argu ture. Har’a wayta silaa sabboonummaan daraaree Oromiyaa waliin gahe kanatti jaarmayaalee har’a akka ABOtti of waamaa jirtanis tahee kanneen addatti baatanii maqaa haaraya moggaafattan keessatti sun hin mul’atu. Gariin keessan akka naannootti wal qoqqooduu fi wal irraa qoollifachuudhaan gurmooftanii dhagaa walitti darbaa jirtan.
Walumaa galatti haalli isin keessa jirtan qabsoo ummata keenyaa kan guyyaa guyyaatti lubbuu jagnoota meeqaa kitimaa deemaa jiru kana galiin gahuuf qooda hogganummaa quufsaa kennuu kan danda’aa jiruu miti. Sababni isaas :
Dubbataa ABO duraanii
Yerooblog	Opinions, Oromia &Ethiopia, Oromo Protests, Politics	1 Comment July 16, 2016 9 Minutes